Addvocate: Mamantatra, manatanjaka, mandrefy, manatsara, mifehy | Martech Zone
Addvocate: Mamantatra, manatanjaka, mandrefy, manatsara, mitondra
Talata, Oktobra 1, 2013 Zoma, Septambra 27, 2013 Douglas Karr
Tsy manararaotra ny hery matanjaka ananany ao anatiny ny orinasa raha resaka media sosialy. Izahay dia mijery mandrakariva rehefa mampiasa orinasa haino aman-jery sosialy 1 na 2 ny orinasa hitantanana fisian'ny media sosialy orinasa. Miasa mafy izy ireo, mizara atiny lehibe, saingy ao anaty lavaka manokana izy ireo raha ny fampiroboroboana ny atiny. Raha tena te hifaninana ianao, maninona no tsy araraotinao ny mpiasa mba hanampy anao hampiroborobo ny fisianao amin'ny Internet?
Addvocate mamela ny orinasa hanara-maso sy hanatsara ny fisian'ny sosialin'ny marika amin'ny alàlan'ny fanamorana ny mpiasa hizara atiny mahaliana sy ho an'ny mpivarotra hanaraka ny fandraisan'izy ireo anjara sy hahatrarana azy ireo.
Tsara sy tsotra ny fampiharana. Mampifandray ireo tambajotran-tseraserany ny mpiasanao, manampy plugin plugin ary miditra. Eo amin'ny sisiny ankavia, manoratra izay tianao zaraina ianao, mampiditra fanamarihana manokana ho an'ny mpiasanao, ary kitiho ny fampiroboroboana! Ankehitriny ny mpiasanao tsirairay dia hahita ny atiny hampiroborobo amin'ny sariny:
Ahoana ny fiasan'ny Addvocate?
Fantaro - Misafidy ny rafitra Addvocate ny mpiasa ary manangana mombamomba azy, mampiseho anao izay maneho ny marikao amin'ny sosialy. Ny piraofilina rehetra dia azo alamina isaky ny vondrona, azo karohina amin'ny anarany, tantanana ao amin'ny Twitter, departemanta na koa fahaiza-manao mba hahazoana endrika feno sy voavolavola amin'ny tambajotrao. Izany dia manamora ny fahitana ny olona mavitrika, ny isan'ny olona ataon'izy ireo, ary ny fipetrahan'ny olona tsirairay ao anatin'ny fikambanana misy anao.
hanamafisana - Rehefa mahita zavatra mahaliana an-tserasera ny mpiasa iray dia tsindrio fotsiny ny extension Addvocate ao amin'ny bikan'ny fitaovan'ny mpitety tranonkala mba hanoroana ilay lahatsoratra amin'ireo mpiara-miasa aminy, ary ampiana famaritana fohy momba ny atiny sy ny antony ilana izany. Rehefa mizaha ny renirano misy azy ireo ny mpiasa dia afaka misafidy izay tian'izy ireo zaraina amin'ny tambajotran'izy ireo izy, maneho hevitra amin'ny hafatra, ary manohy ny resaka amin'ny fanomezana sosokevitra hafa mifandraika amin'izany.
antonony (Enterprise Edition ihany) - Raha vao manome soso-kevitra ny mpiasa iray dia miditra amin'ny filaharana antonony izy io, izay anaovan'ny mpanelanelana hevitra sy fankatoavanao mba hahazoana antoka fa ny atiny sahaza no zaraina. Ireo mpanelanelana dia afaka mandahatra ihany koa rehefa miditra ao anaty renirano ny lahatsoratra, ary manolotra atiny ho an'ny olona, ​​vondrona na departemanta manokana hanentanana ny fizarana mandaitra.
ohatra - Addvocate's Analytics avelao ianao hanara-maso ny zava-drehetra, ao anatin'izany ny URL fohy sy ny kaody fampielezan-kevitra, handrefesana ny tena tanjonao ara-tsosialy. Azonao fantarina tsara izay lazain'ny olona, ​​ny fandraisan'ny tambajotran'izy ireo, ary iza ny superstar media sosialy an'ny orinasanao.
manatsara - Manitatra hatrany ny tratrany amin'ny alàlan'ny fampiasana Addvocate's Analytics manatsara sy manatsara ny hafatrao. Mamorona atiny voafaritra mba hitrandrahana lohahevitra malaza, hanarahana ny andro mavitrika indrindra amin'ny herinandro, ary ny atiny fitetezana ho an'ny mpiasa manana andraikitra lehibe indrindra aminao.
Mifehy (Enterprise Edition ihany) - Ao amin'ny rafitra Addvocate, nanasa sy mamela ny hiditra amin'ny kaonty misy marika ny mpampiasa. Raha vantany vao miala amin'ny fikambanana izy ireo, dia lany daty avy hatrany ireo mari-pahaizana navoaka, mamela ny fidirana amin'ny fidirana ho dingana mora kokoa.
Dos sy tsy tokony hatao amin'ny marketing amin'ny atiny
Ilay mpandresy amin'ny fitantanana tetik'asa Agency: Brightpod
1 Oktobra 2013 à 9:22
Misaotra nizara Doug! Tena nahavariana ilay famakiana! Misaotra anao nanome hevitra!